Bhaibheri ndiro DNA yeHupenyu Husingaperi
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Bhaibheri ndiro DNA yeHupenyu Husingaperi
Bhaibheri ndiro DNA yeHupenyu Husingaperi
Chidzidzo chino chichaedza kuburitsa pachena kuti Bhaibheri ndiro DNA redu remweya.
DNA inodaidzwa kuti “mutauro wehupenyu” sezvo ichitonga sero rega rega rinorarama. Kana tikatendera Bhaibheri kuti ritonge hupenyu hwedu, ipapo Shoko raMwari ndiro rinobva raita “mutauro weHupenyu husingaperi”.
MuTestamente yekare Mwari akaudza Mosesi kuti avake areka yematanda yakafukidzwa nendarama. Areka iyi yaive yakaita sebhokisi rematanda. Pamusoro peareka paive nechifunhiro chekuyananisira. Makerubhi maviri endarama akaitwa akamiswa pamusoro peareka, akatarisa pachifunhiro chekuyananisira.
Aive akatarisana. Saka nekudaro tinoti anobvumirana.
Pakati pawo paive neMweya Mutsvene waMwari. Apa ndipo paaitaura ari. Nhasi tinoziva kuti Mwari anotaura kupfurikidza Testamente yekare neTestamente Itsva. Ndidzo dzega nzvimbo dzatinowana chokwadi dzisingatirasise.
Makerubi maviri pamusoro peareka yemaJuda aimiririra Testamente Yekare neTestamente Itsva.
EKSODO 25:17 Uite vo chifunhiro chokuyananisa nendarama yakaisvo-naka, kureba kwacho makubiti maviri nehafu, novupamhi bwacho kubiti rimwe nehafu.
18 Uite vo makerubi maviri endarama, uaite nendarama yakapambadzirwa pamiromo miviri yechifunhiro chokuyananisa.
19 Ita kerubi rimwe pamuromo mumwe nerimwe kerubi panomumwe muromo; uite makerubi pamiromo yacho miviri zvive chinhu chimwe nechifunhiro chokuyananisa.
20 Makerubi atambanudzire mapapiro awo kumusoro, akafukidza chifunhiro chokuyananisa namapapiro awo, zviso zvawo zvakatarisana; zviso zvamakerubi ngazvitarire kuchifunhiro chokuyananisa.
21 Uise chifunhiro chokuyananisa pamusoro peareka, ugoisa mukati meareka chipupuriro chandichakupa.
22 Ndipo pandichasongana newe, nditaure newe, ndiri pamusoro pechifunhiro chokuyananisa, ndiri pakati pamakerubi maviri ari pamusoro peareka yechipupuriro, ndikuvudze zvose zvandichakupa, kuti uraire vanhu vaIsraeri.
Mwari aisangana naye ari pakati pemakerubi maviri.
Izvi zvinoisa kukosha nehukama huri pakati pemaBhuku eBhaibheri eTestamente Yekare neTestamente Itsva.
Izvi zvinosimudza mubvunzo unofadza. Chii chinoyananisa maTestamente maviri akasiyana muBhaibheri rimwechete?
Testamente Yekare inoisa kukosha panyika yeIsraeri serudzi rwainamata Mwari vachiponeswa nemabasa avaiita mukuteerera Murairo unosanganisa kupira zvipo nezvibairo muTabernakeri kana muTemberi. Kukosha kwaive panyika, ine miganhu yechipikirwa yaive yapihwa Abraham naMwari. Vairwisa nekukunda vavengi vavo neminondo. Vaivenga vaivauraya. Vaishingirira kubudirira munezvehupfumi uye semubairo wekubatira Mwari zvakanaka.
Parizvino kune Testamente Itsva yeMweya iyo chivimbiso kwatiri ndiwo Mweya Mutsvene uye nyika yedu ndiko kurarama neShoko rega rega rakanyorwa muBhaibheri. Pano tinoponeswa munhu mumwe nemumwe nengoni kuti Mwari atitungamirire uye atishandise mukuda kwake pachinzvimbo chekumhanyisana nekuda kwedu isu. Zvinhu zvenyama hazvisisina kukosha sezvo chinhu chakakosha parizvino kugadzirira kuuya kwaJesu kweChipiri. Hatina vavengi vekurwa navo panyama sezvo tiripo kuti tirwe nezvivi nekutadza, kwete vanhu. Munondo wedu ndiro Shoko raMwari. Tinoda vaya vanotiuraya nekuti chero tikakunda kana kukundwa panyika pano hazvina kukosha pahupenyu hwedu. Kuponeswa, kurarama muhutsvene uye kugamuchira rubapatidzo rweMweya Mutsvene kuti tigowana nzvimbo yedu kana chigaro mukuda kana muhurongwa hwaMwari, ndicho chinangwa chedu chikuru. Hupenyu huno ingori gadziriro nekudzidza kuitira hupenyu husingaperi.
Chimiro cheTestamente yekare nemakerubi maviri ari pamusoro peareka chaimiririra Testamente Yekare neTestamente Itsva ese anobvumirana sezvo Testamente yekare ingori mumvuri kana munongedzo weTestamente Itsva. ChiKristu ndicho chega chitendero pasi pano chinotevera zvakazara matsimba echitendero chenguva yakadarika, chinova Testamente yechiJuda yekare. Testamente Itsva ndiyo inozadzisa Testamente Yekare.
Mwari anotaura nesu chete kana tikaita kuti Testamente Itsva neYekare zvitenderane.
Pakati pemaTestamente maviri aya pane maBhuku mana eEvangeri anotiudza hupenyu hwaJesu.
Saka hushumiri hwaJesu hunouya pakati pemaTestamente maviri hwosunganidza Testamente Yekare neTestamente Itsva.
Tinowanzotora maBhuku mana eEvangeri sechikamu cheTestamente Itsva, chinova chokwado.
Asi kubva pamaonero edu vanhu, mumwe nemumwe wedu inhengo yekereke yemaKristu uye kereke yechiKristu inotangira paBhuku raMabasa Avapostora, anova Mabasa eMweya Mutsvene mukereke.
MuBhuku raMabasa chete ndipo pakatangira vadzidzi vaJesu kuziva kuti vaiitei.
Pakati pehushumiri hwaJesu, hunotsanangurwa nemaBhuku mana eEvangeri, vadzidzi vaingomutevera vasingazivi kuti chii chaiitika.
Mukati memaBhuku mana eEvangeri, Jesu ega ndiye aiziva kuti chii chaiitika.
Saka maBhuku mana eEvangeri ndiwo moyo weBhaibheri. Hushumiri hwaJesu ndipo Mwari paaitaura nesu zvizere.
Hakuna mumwe munhu angagone kutaura nesu nenzira imwechete neinoshandiswa naJesu. Ndiye Wekumusoro-soro. Shoko rake ndiro mukuru wedu. Hupenyu hwake chete ndihwo hwakakwanisa kubatanidza pamwechete Testamente Yekare neTestamente Itsva.
Testamente yekare yaive yakatarisira Kristu. Testamente Itsva inotarisa kumashure pahushumiri hwake.
Saka kana tikatarisa nhorondo yemaJuda, inoperera muBhuku raMaraki mumakore akapoteredza 397 BC. Mumashure maizvozvo vakarasika nekuti vaive vasisina hutungamiri hwemuprofita kuti avatungamirire muhurongwa hwaMwari.
Nhorondo yekereke inotangira muBhuku raMabasa, pakagamuchirwa Mweya Mutsvene nevadzidzi vachibva vatanga basa. Kutangira ipapo ndipo pavakaziva nekunzwisisa hurongwa hwaMwari.
Pakati paMaraki neBhuku raMabasa tine nguva huru yekusaziva kwevanhu apo vanhu vaive vasingagoni kuzvibatsira kana kuzvinunura. Murenje remweya iri kwakauya Jesu aive akaita seshizha nyoro panyika yakaoma isingabereki. Saka hushumiri hwaJesu chete ndihwo hunokwanisa kubatanidza maTestamente maviri akasiyana pamwechete.
Pauro aive musoni wematente. Mwari akamushandisa kusonanidza Testamente Yekare pamwechete neTestamente Itsva zvekuti zvakabatana zvisingarwisani.
Tsoro ndeyekuti, nei Mwari akashandisa maBhuku mana eEvangeri kubatanidza Testamente Yekare neTestamente Itsva pamwechete?
Ngatiitei kuti mutsetse mutema wekuruboshwe umiririre Testamente Yekare.
Toita kuti mutsetse mutema uri kurudyi umiririre Testamente Itsva.
Mitsetse mina ine mavara akasiyana-siyana, maBhuku mana eEvangeri, achibatanidza Testamente Yekare neTestamente Itsva pamwechete. Uyu ndiwo mutauro weHupenyu Husingaperi, Bhaibheri.
Negore 1953 vezvesainzi vaviri Francis Crick naJames Watson vaive vaziva chimiro chemoreku reDNA rinorarama musero rechinhu chinorarama. (moreku chikwata chemaatomi akabatana). DNA iri rinodaidzwa kuti “mutauro wehupenyu hwenyama” nekuti rinotaurira sero rega rega kuti rozvivaka sei uye kuti roita sei basa raro.
Ngatitarisei chidimbu chiduku cheDNA, chikova mutauro wehupenyu hwenyama.
DNA rine mitsetse mirefu miviri (yakamiririrwa nemitsetse mitema miviri isina kuswatuka) inomonana. Inobatanidzwa nehukama huna hunodaidzwa kuti “bases” muchirungu hunodaidzwa kuti A, T, G naC. A na T chete ndizvo zvinokwanisa kubatana. G na C zvobatanawo.
Saka izvi zvinotidzidzisei pamusoro peBhaiberi, “mutauro weHupenyu Husingaperi”?
Mitsetse mitema miviri mirefu inomiririra Testamente Yekare neTestamente Itsva. Inomonana nekuti umwe unoda umwe kuti ugone kurarama. Testamente Yekare yakaporofita zvichaitika muTestamente Itsva. Testamente Itsva yakazadzisa zvakataurwa neTestamente Yekare. Testamente Yekare yakatanga nzira kana mumvuri kana munongedzo waizozadziswa neTestamente Itsva.
Semuenzaniso, muTestamente Yekare vaifanira kushambidza chipiriso chisati chabairwa.
Saka Jesu aifanira kushambidzwa sezvo aive chipiriso chikuru. Johane Mubapatidzi akazadzisa izvi paakabapatidza Jesu. Johane aisuka Chipiriso chisati chabairwa zvivi zvedu paCalvari.
II MAKORONIKE 4:6 Akaita vo midziyo yokusukira inegumi, akaisa mishanu kurudyi, nemishanu kuruboshwe, yokusukira’mo; zvimwe zvezvipiriso, zvaipiswa, zvaisukirwa’mo; asi dziva rakanga riri ravaprista rokushambidzira’mo.
MuTestamente yekare muprista mukuru Aroni aifanira kushambidzwa apedza ozodzwa nemafuta.
REVITIKO 8:6 Mosesi akavuya naAroni navanakomana vake, akavashambidza nemvura.
REVITIKO 8:12 Akadira vo [Mosesi] mamwe mafuta okuzodza nawo pamusoro waAroni, akamuzodza kuti amutsaure.
Johane Mubapatidzi akashambidza Jesu murubapatidzo rwake rwemvura murwizi rweJorodani Mweya Mutsvene ukamuzodza paakabuda mumvura.
JOHANE 1:29 mangwana akavona Jesu achivuya kwaari, akati: Tarirai Gwaiana raMwari, rinobvisa zvivi zvenyika.
30 Ndiye wandaireva, ndichiti: Shure kwangu kunovuya Murume wakava’po, mberi kwangu, nokuti wakanditangira.
31 Neni ndakanga ndisingamuzivi; asi ndizvo zvandakavuyira, ndichibapatidza nemvura, kuti avoneswe kuvaIsraeri.
32 Johane akapupura akati: Ndakavona Mweya achiburuka kudenga senjiva , akagara pamusoro pake.
Saka Jesu semuPrista Mukuru weTestamente Itsva aifanira kushambidzwa mumvura obva azodzwa neMweya Mutsvene.
Mafuta muTestamente Yekare aimiririra Mweya Mutsvene.
Testamente Yekare inoperera pana Maraki, makore akapoteredza 397 BC. Mumashure maizvozvo maJuda aive asisina hutungamiri hwechiprofita kusvika pakuuya kwakazoita Johane Mubapatidzi.
Saka, mumashure memuprofita Maraki, maJuda akatanga kurasikirwa negwara ravaifamba.
Kereke yeTestamente Itsva yakazotanga muBhuku raMabasa. MaBhuku mana eEvangeri ndiwo anosunganidza Testamente Itsva neTestamente yekare. Pachokwadi, Jesu ega ndiye aiziva zvaiitika munguva yehushumiri hwake. Vadzidzi vaingomutevera, vaisaziva panguva iyoyo kuti chii chaiitika.
Tinokwanisa kupokana nekuti mukati menguva yehushumiri hwaJesu vadzidzi vaivepo kudzidza gwara rechokwadi zvishoma nezvishoma.
Kubva kuna Maraki kusvika kunaMabasa yaive nguva yekusaziva kwevanhu apo vanhu vaive vasingakwanisi kunzwisisa kuti chii chaiitika munzvimbo dzemweya. Mukati menguva iyi, Jesu akauya kuzoita zvaaikwanisa kuita iye ega, kunova kuripira muripo wezvivi nekuita Sungano itsva.
Mweya Mutsvene pawakaburuka Zuva rePentechosti, vadzidzi vakabva vatanga kuona zvakajeka hurongwa hwaMwari nekutanga basa, mumashure mezvo havana kuzomira. Pazuva rePentecosti vadzidzi vakabva vatanga kunzwisisa kuti hushumiri hwaJesu hwaive hwei nguva yese. Vakabva vatangawo kunzwisisa kuti ivo vaifanira kuitei kuti vaparidze Evangeri.
Vakabva vatangawo kunyora Testamente Itsva kuti isu tigozivawo kuti totenda mune zvipi uye kuti toitei.
Saka nei kuine maBhuku mana eEvangeri? Ese anotaura nyaya imwechete yaJesu. Asi imwe neimwe inotipa muono wakati siyanei neumwe. Munoona, mamoreku e DNA anotonga hupenyu hwenyama, panofanira kuva nezvikamu zvina zvinobatanidza nekuyananisa mitsetse yacho mikuru iri miviri.
Saka zvinotora maBhuku mana eEvangeri kuti abatanidze Testamente Yekare neItsva pamwechete.
Anobatanidzwa maviri maviri: Mateo naMarko. Ruka naJohane. Izvi zvinotiudzei?
Mateo (zvitsauko 28) naMarko (zvitsauko 16) akabatanidzwa anoburitsa zvitsauko 44.
Ruka (zvitsauko 24) naJohane (zvitsauko 21) zvikabatanidzwa zvinoita zvitsauko 45.
Izvi ndizvo zvikamu zvakareba zvakafanana kuti zvisunganidze kumonana kwemitsetse yeTestamente Yekare neTestamente Itsva pamwechete. Panodzokorora yanano idzi, zvakadaro zvinotanga kuratidzika sezvitsiko pamanera ekukwira kudenga. Kukwira manera aya kunotiendesa kumusoro, Kudenga.
Saka tichiramba tichidzidza maBhuku mana eEvangeri, tinoona kuti anozivisa yanano zhinji kwazvo dziri pakati pemaTestamente maviri Yekare neItsva kukunda zvatinofungira. Kune zvizhinji zvatichasangana nazvo munzira yedu yekudzidza uku.
Izvi zvinotiyeuchidza pamusoro pehope dzakarotwa naJakobo.
GENESISI 28:12 Akarota, akavona danho rakanga ramiswa panyika, musoro waro wakasvika kudenga; akavona vatumwa vaMwari vachikwira nokuburuka naro.
Saka regai titarise kuti kukosha kupi kunoiswa neEvangeri rimwe nerimwe pahushumiri hwaJesu.
1. Mateo rinotsanangura Jesu saMambo, Mwanakomana waDavidi.
2. Marko rinotsanangura Jesu semuranda. Ndiye oga anobata basa uye anoziva zvaanoita.
Saka tinobva taona kuti nei Jesu akasiyana nevamwe vakuru vese. Ndiye Mambo wedu anotitungamirira nemuenzaniso waanoita iye pachake, asi achizvideredza kuti atibatire nekutakura mitoro yedu kuti tigone, zvisinei nekutadza kwedu, kumutevera.
3. Ruka anotsamangura Jesu seMunhu akarurama.
4. Johane ndiro Evangeri rakadzamisisa. Anozivisa Jesu saMwari, Shoko.
Ngatitarisei Evangeri raRuka.
Vanhu vazhinji varombo. Saka Jesu ndeumwe wevazhinji sezvo akaberekerwa muchidyiro. Aive asina chinhu. Akakumbira mbongoro yekutasva musi weSvondo yemiChindwe. Akakumbira imba yekudyira chirairo chekupedzisira. Akakwereta guva rekuti avigwe mumashure mekufa kwake. Akapomerwa zvenhema. MaJuda akadanidzira kuti vaida havo kuti mhondi Baraba ararame, pachinzvimbo chaJesu. Aive asina mhosva asi akatukwa nevazhinji, akauraiwa nenzira inorwadza zvikuru. Akafira kuripira mhosva dzeavo vasingamudi (iwe neni). Takazongotanga kumuda mumashure mekunge atiitira nyasha, kwete asati.
Totarisa Evangeri raJohane.
Hamuna mifananidzo muBhuku raJohane. Mufananidzo muenzaniso wezvinhu zvepasi rino unoreva chokwadi chakadzama chemweya. Mukushi akakusha mbeu. Zviri nyore kuti tinzwisise. Tinobva tanzwisisa mucherechedzo wechokwadi chacho pamweya kuti mbeu iShoko raMwari rinofanira kukura mumoyo yedu. Asi mufananidzo uyu unotiyambira kuti tingwarire. Bhaibheri harimhuri mukushi (munhu anotitaurira pamusoro peShoko raMwari nenzira yakanaka kana yakaipa) asi rinozvidza ivhu rinogamuchira mbeu inova moyo yedu. Saka kana musina kufara nenzira yashandiswa nemunhu kukuudzai pamusoro paMwari, zvakaomera imi. Munotarisirwa kuita zvinoda Shoko raMwari zvisinei kuti mariudzwa zvakaipa kana zvakanaka sei.
Asi kuna Johane hakuna mifananidzo iri nyore kunzwisisa. Anotipa chokwadi chakadzama chakatwasuka (isu tinozvisiya zviri nyore, nekuti kunzwisisa kwedu kuduku) Semuenzaniso: vakauya kuna Jesu nemukadzi akabatwa achifeva, wavaida kuuraya, iye akamira zvinoshamisa akanyora muvhu nemunwe wake nei? Ari kuedza kutiudza chimwe chinhu chakadzama, asi isu tiri mapofu azere uye hatina shungu. Jesu akabva avapa mhinduro yakanakisa “Usinechivi pakati penyu ngaatange kukande-bwe kwaari”. Neizvi vakasiya kuda kuuraya vakamurega achienda. Saka chiitiko ichi chose chaifanira kuva chakapera. Asi chaive chisina nokuti akabva anyora kechipiri muvhu. Aida kuti tinzwisise chokwadi chakadzama chaaiedza kuzivisa kwatiri. Asi isu parizvino tinoona kunyora muvhu uku sekusina zvakunoreva. Chinhu chinongosiiwa chakadaro.
Vesainzi pavakawana DNA vakakwanisa kuwana nekunzwisisa basa rezvikamu zvitatu chete kubva muzana zveDNA. Rimwe rese raive risina basa ravakakwanisa kuziva. Saka vakabva vasiyana nezvikamu 97 kubva muzana zveDNA redu vachiti harina maturo. Tinoita zvimwechete neBhaibheri. Chimwe chinhu chinotaurwa tonzwisisa zvikamu zvitatu chete kubva muzana. Zvimwe zvese zvoshaiwa chinangwa chatinoziva. Saka tinobva tasiyana nezvikamu 97 % zvinenge zvirimo nekuti hatizvinzwisisi kana kuwirirana nazvo tobva tasiyana nazvo.
Asi nhasi vesainzi havasisina chokwadi pamusoro pekuita kwavo zvachose. Vakutanga kufungidzira kuti zvikamu 97 kubva muzana zveDNA izvi zvakakoshera kuti tirarame uye kuti zviudze zvikamu zvitatu zvine basa kuti zvoita sei basa razvo rinoita serakaoma kunzwisisa kukunda zvatakatanga kuona.
Saka ngwarirai pamusoro pezvidimbu zvese zveBhaibheri Shoko raMwari zvamunosiyana nazvo. Zvakakosha zvakanyanya kukunda zvamunofungidzira.
5 Zvino Mosesi wakatiraira pamurairo kuti vakadzi vakadaro vatakwe namabwe. Zvino imi nunoti kudiniko?
6 Vakareva izvozvo vachimuidza, kuti vawane chavangamupomera mhosva nacho. Asi Jesu wakakotama, akanyora pasi nomunwe.
7 Zvino ivo vakati vachiramba vachimubvunza, akakotoroka, akati kwavari: Usine chivi pakati penyu, ngaatange kukande-bwe kwaari.
8 Akakotama zve akanyora pasi.
9 Zvino ivo vakati vachizvinzwa, hana dzavo dzikavarova, vakabuda mumwe-mumwe, kutanga vakuru kusvika kunowokupedzisira, Jesu akasara ari oga, nomukadzi akanga amire pakati pavo.
MuEvangeri raJohane Jesu ari kuziviswa saMwari. Nekuti Ndiye Mwari, Jesu anotarisira kuti tizive nekunzwisisa chokwadi chakadzama.
Mwari haasingori Mwari wevanhu vasingazivi nevanhu vanoita savana vaduku. Kana tichifunga kuti tinoziva zvakakwana kuti tidzidzise vamwe vanhu, Mwari anenge akatarisira kuti tinzwisise kuda kwake zvakazara.
Mumashure mazvose, ruzivo nehuchenjeri ndizvo zvipo zviviri zvekutanga zveMweya zvakataurwa pakutanga.
I VAKORINTE 12:7 Asi mumwe nomumwe unopiwa kuratidzwa kwoMweya kuti vose vabatsirwe.
8 Nokuti umwe unopiwa noMweya shoko rovuchenjeri; mumwe shoko rokuziva noMweya iwoyu;
9 Mumwe kutenda muMweya iwoyu; mumwe zvipo zvokuporesa muMweya iwoyu;
10 Mumwe kuita mabasa esimba; mumwe kuprofita; mumwe, kuzivisisa mweya; mumwe marudzi endimi; mumwe kududzira ndimi;
1 VAKORINTE 12:28 Mwari wakaisa vamwe pakereke, pakutanga vapostora, rwechipiri vaprofita, rwechitatu vadzidzisi, tevere vaiti vemabasa esimba, tevere zvipo zvokuporesa, navabatsiri navabati, namarudzi mazhinji endimi.
29 Vose vapostora here? Vose vadzidzisi here? Vose vaiti vamabasa esimba here?
30 Vose vane zvipo zvekuporesa here? Vose vanotaura nendimi here? Vose vanodudzira here?
31 Asi shingairirai zvipo zvikuru: ndinokuratidzai vo nzira yakaisvonaka inopfuvura dzose.
Kana tikatsvaga zvipo zvakanakisa, hapana zvakataurwa pasati pataurwa pamusoro peruzivo rwezvinoreva shoko uye huchenjeri hwekubatanidza zvikamu zvakasiyana zveShoko pamwechete kuti zvitipe zaruriro yekutambanudza Shoko.
Rangarirai Mwari paaibvunza Jobo. Aitarisira kuti Jobo achange achiziva zvinhu zvakadzama.
JOBO 38:1 Ipapo JEHOVA wakapindura Jobo, ari pachamupupuri akati:
2 Ndianiko uya unodzima zano rangu achiriita rima, namashoko asinezivo here?
3 Chizvisunga chivuno chako zvino somurume; nokuti ndichakubvunzisisa iwe undidudzire.
4 Iwe wakanga uripiko panguva yandakateya nheyo dzenyika? Chidudzira kana unezivo.
5 Ndiyakiko wakatara kukura kwayo, kana uchizviziva? Kana ndiyani wakaiyera norwonzi?
6 ko nheyo dzayo dzakateiwa pamusoro pei? Kana ndiyaniko wakateya ibwe rayo rekona?
7 Panguva yakaimba nyeredzi dzamambakwedza pamawa, vuye vanakomana vose vaMwari vachipururudza nomufaro?
8 Kana ndiyaniko wakadzivira gungwa nemikova, panguva yokudzutuka kwaro, richibuda pachizvaro?
Iyi mibvunzo yakaoma kudaira.
Kusvikira apa Jobo aifunga kuti akachenjera. Zvichienzaniswa nevamwe vanhu aive akachenjera. Asi mukuona nekufunga kwaMwari Jobo aive nerwendo rukuru rwekuti adzidze.
Mwari haafadzwi nekusaziva kwedu Magwaro.
Ruzivo rwedu rwevanhu panyama mazuvano rwawandisa zvekuti tinofanira kudzidza zvakanyanya kuti tigare tichifambirana nenguva.
Tinodzidza zvakawanda uye dzimwe nguva tinofanira kurasa zvatakadzidza patinoona kuti ruzivo irworwo haruchashande todzidza zvimwe kuti tirambe tichifambirana nenguva. Asi kusaziva kwedu munyaya dzekunzwisisa Magwaro hakuiti sekunoshanduka. Tine nungo dzakanyanya dzekudzidza Magwaro. Uye tiri mapofu zvekutadza kuona zvakadzama zvaanoreva. Tinotenda kuti zvese zvatinoziva pamusoro pechitendero ndezvechokwadi. Kana tikatarisana neMagwaro atisingakwanisi kutsanangura, hazviuye kwatiri kuti titi tine zvinhu zvisirizvo zvatakabatira pazviri zvatinofanira kurasa kuti tidzidze chokwadi. Tinotya kubvuma kuti tinoda kugadziriswa saka tinongosiya Magwaro atisingagoni kutsanangura.
Jesu akaraira vadzidzi vake nekuti havana kubatanidza kuyanana kwekuwanda kwematengu emafufu echikafu chakasara chavakaunganidza apedza kupa vanhu vazhinji chikafu. Ivo vaifunga kuti huwandu hwematengu aya hwaive husina kukosha. Asi iye akazoisa chirevo pamusoro pehuwandu hwematengu emafufu aya.
MATEO 16:8 Zvino Jesu, achizviziva, akati kwavari: imi vokutenda kuduku, munorangana pakati penyu nemhaka yeiko, kuti hamunezvingwa?
9 Hamunzwisisi nazvino here, kana kurangarira zvingwa zvishanu zvavanhu vane zvuru zvishanu, namatengu amakawana kuti aive mangani?
10 Kana zvingwa zvinomwe zvavanhu vane zvuru zvina, namatengu amakawana kuti aive mangani?
Saka kana tikashanda naJesu saMwari, anenge akatarisira kuti tizive chokwadi chakadzama chemuBhaibheri.
Hazvina kukosha kuti tizive kuti vakawana matengu manomwe nematengu gumi nemaviri. Anoda kuti tizive kuti nei huwandu hwematengu uhu hwakataurwa.
Hazvina kukwana kuti tizive kuti Davidi akatiza kubva kuna mambo Sauro akanodya chingwa chekuratidzira chaitenderwa kudyiwa nevaprista chete. Tinofanirawo kuziva kuti nei Mwari akamutendera kuita izvi akasamuranga. Kana mambo akanaka akabata zvinonhuwira zvekupira, zvinotenderwa kubatwa nemaprista chete, Mwari airova mambo iyeye nemaperembudzi.
Evangeri raRuka naJohane anofambawo ari pamwechete.
Jesu ndiye Munhu akarurama anova Mwari mumuviri. Kwatiri vanhu, izvi zvinoita sezvisingagoneke. Ndicho chakavanzika chikuru. Mwari akava munhu. Munhu uyu aitove Mwari mumuviri, Emanuere, Mwari unesu. Mafungiro edu sevanhu haagoni kunzwisisa kuti munhu angave Mwari. Tinonzwa izvi zvisingagoneke. Asi Mwari anoshanda achiita zvinonzi hazvigoneke. Hakuna chaasingagoni kuita.
MATEO 1:23 Tarira, mhandara ichava nemimba, ichazvara mwanakomana, vachamutumidza zita rinonzi Emanuere; ndokuti kana zvichishandurwa: Mwari unesu.
VAKORESE 2:8 Chenjerai kuti murege kutapwa nomunhu novuchengeri, nokunyengera kusinamaturo, achitevera tsika dzavanhu nezvokuvamba zvenyika, asingateveri Kristu.
Izvi zvinoshamisa pfungwa dzevanhu asi Mwari ega ndiye akagona kuva Munhu uye mukuita izvi akabatanidza Testamente Yekare neItsva pamwechete. Kuti aripire zvivi uye azadzise zvakaprofitwa muTestamente Yekare zvaisagonekwa nechero mumwewo munhu. Hakuna munhu munhorondo yevanhu aizokwanisa kuita izvi. Munhu akasarudzika uyu aifanira kuzova iye Mwari pachake.
Zviri muEvangeri raJohane kuti Tomasi akati “Ishe wangu naMwari wangu”.
Mwari anotarisira kuti tione chokwadi cheMagwaro chakadzama.
JOHANE 20:28 Tomasi akapindura, akati kwaari: Ishe wangu naMwari wangu.
Chiedza kana mwenje unoshanda nenzira imwechete iyi “inoshamisa”. Vezvesainzi mumakore akapoteredza 1800 vakazivisa kuti chiedza chinoita semasaisai pachinopararira chichienda nemativi ese kubva panzvimbo pachiri. Sezvazvinoita kana ukadonhedza dombo mumvura yakagadzana. Masaisai anobva aenda nemativi ese. Asi mumakore ana 1900 Einstein akazowana kuti chiedza chinogona kuita hunhu hwakafanana sechinhu chakabatana, sechinhu chiduku chinokwanisa kufamba chichienda rutivi rumwechete panguva imwechete.
Saka izvi zvinoita sezvisingagoneki. Chingaende sei mativi ese kana chichigona kuenda rutivi rumwechete.
Hatikwanisi kunzwisisa izvi asi zvinhu zvakagara zviriko hazviisirwi miganhu nezvinhu zvatinoziva nekunzwisisa.
Chinhu chikuru ndechekuti, chiedza chinogona kuita hunhu hwechinhu chakabatana kana kuti hunhu hwemasaisai. Saka tinofanira kutambira chinhu ichi.
Nzira imwechete yekuti tikwanise kurarama nechokwadi ichi ndeyekuti hatingafungi nezvezvinhu izvi zvose nguva imwechete.
Kana tikaita tsvagiridzo yekuti tione kuti chiedza chinoita hunhu hwechinhu chakabatana, hatifaniri kufunga nezvacho semasaisai tiri pakati pekuita tsvagiridzo iyi. Kana tava pakutarisa hunhu hwechiedza chichiita semasaisai, hatifaniri kufunga nezvacho sechinhu chakabatana kana tiri patsvagiridzo iyi.
Jesu ndiye Chiedza chenyika.
JOHANE 8:12 Zvino Jesu wakataurazve navo akati: Ndini chiedza chenyika: unonditevera haangatongofambi murima, asi uchava nechiedza chovupenyu.
Saka Jesu anoita zvisingagoneki nekuti anoita hunhu hwaMwari uye hunhu hweMunhu.
Musaedze kumuona seMunhu kana saMwari zvose nguva imwechete.
Paakafamba pamusoro pemvura akaita chingwa nekumuka kubva kuvakafa, muonei saMwari musava nemubvunzo wekuti munhu anozvigona sei izvozvo.
Paakafamba nechikepe, paakarara, nepaakadya chingwa nepaakafa muonei semunhu musabvunze kuti Mwari angaite sei izvozvo.
Ndiye Zvose Munhu uye Mwari chero tisingagoni kunzwisisa kuti izvi zvingagoneka sei. Jesu haaisirwi miganhu nekusagona kwedu kunzwisisa zvaanokwanisa kuita.
Jobo aisanzwisisa zvakavanzika zvekusika zvakataurwa naMwari kwaari. Asi kusaziva kwaJobo hakuna kumisa Mwari kusika nyika.
Saka ndeipi micherechedzo yatingabatanidze nezvakavanzika zvaJesu zvinoita sezvinorwisana?
Kwatiri, mambo haasi muranda. Munhu haasi Mwari.
Saka kune imwe nzira here yemicherechedzo iri nyore yekuti tifunge nayo pamusoro pezvakavanzika zvinoita sezvinopesana izvi inganzwisisike pamusoro peumwe munhu asiri Jesu?
Kutora Mambo samambo wemhuka, Shumba. Jesu ndiye Shumba yerudzi rwaJuda.
Zvino, chero Satani akasimuka ari mhuka huru inotyisa yatinoverenga mune zvakaprofitwa, Jesu wedu anoramba ari mambo wezvipenyu zvese (zvese zvakaipa nezvakanaka) saka zvakadaro anokwanisa kutonga dzimwe mhuka dzese.
Kutsanangura muranda senzombe. Mutoro unorema uri pafudzi pako unokusvitsa pamabvi pako zvishoma nezvishoma paunoedza kuutakura. Asi ukaisa mutoro mumwechete uyu papfudzi penzombe, apa ndipo panoonekwa simba rayo guru apo inobva yapinda munzira isina kana kuona mutoro uri pairi wanga uchiparadza iwe. Jesu aripo kuti atakure mitoro yedu.
Munhu akarurama munhu akaita sesu. Akanzwawo marwadzo sesu, kutambudzika nekubatikana. Saka anotinzwisisa. Uye ndiye murevereri wedu anoda kutireverera kuti tiregererwe pakupomerwa naSatani.
Saka kana tikareurura zvivi zvedu, Anotiregerera zvivi zvedu tonzi “hatina mhosva” pakutongwa kwedu nekuti ropa rake rakadeuka kuti risuke zvivi zvedu.
ZVAKAZARURWA 1:5 Nokuti Jesu Kristu, chapupu chakatendeka, dangwe kuvakafa mubati wamadzishe enyika kunaiye unotida, akatisunungura pazvivi zvedu neropa rake.
I JOHANE 2:1 Vana vangu vaduku, ndinokunyorerai zvinhu izvi, kuti, murege kutadza. Kana munhu achitadza tinomurevereri kunababa, Iye Jesu Kristu wakarurama.
SaMwari Jesu anenge akafanana negondo rinobhururuka. Anokwira kumusoro kudenga kwaanoona mufananidzo mukuru uye zvinhu zvinouya obva aziva kuti angatitungamirira sei zvakanaka. Maonero eziso regondo anogona kukudza chinhu kakapetwa kazhinji kukunda maonero atinoita isu. Saka anoona zvese chero kanhu kaduku katisingaone isu. Saka anoda kufambisa hupenyu hwedu nenzira yakanaka nekuti Iye haangoone zviri patiri chete asi nezviri kure nekumanikidza kwazvo kunonyengera. Anoonawo zvose kusvika nekusingaperi. Tichazvirova nekudemba rimwe zuva nekuti hatina kuvimba maari nguva dzese.
Zvino tinosvika pakuona mufananidzo waJesu wakafanana zvakanyanya nechiratidzo chakaonekwa naJohane kuna Zvakazarurwa Chitsauko 4.
ZVAKAZARURWA 4:6 Pamberi pechigaro chovushe pakange panegungwa rakaonekera, rakafanana nekristaro, napakati pechigaro chovushe, napamativi ose echigaro chovushe, pakanga panozvisikwa zvina zvipenyu, zvizere nameso mberi neshure kwazvo.
Meso anotaura pamusoro pehungwaru. Anoona zvakadarika (meso ari kumashure) uye anokwanisa kuona zviri mberi (meso ari kumberi).
Hell and the Grave. Mhuru inzombe duku. Jesu akafa achiri muduku, aingove nemakore 33. Asi nzombe iyi yaive yakasimba zvakanyanya zvekuti haina kubvira yaita chivi ikakunda rufu, Hadesi uye Guva.
Izvi zvipenyu zvakanaka. Chipenyu chinomiririra simba nekuti chipenyu ichi chakasimba.
Ava ndivo varindi vana vakakomberedza chigaro chaMwari chovushe.
Kereke inogona chete kuva muviri waKristu kana iye ari Musoro.
Kukereke varindi vana varipo kuichengetedza uye kuitungamirira.
VAEFESO 5:23 Nokuti murume musoro wemukadzi, saKristu vo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi womuviri.
Ndapota musafe makati mumwewo munhu zvake ndiye musoro wekereke.
Jesu ega ndiye musoro wedu, nekuti zvakare akaita zvinhu zviviri zvinoita sezvisingagoneke: anogara Kudenga kwaakabata ramangwana mumavoko ake uye anogarawo mumoyo yedu pano panyika, panguva imwechete, kuti atitungamirire. Hakuna mumwe munhu anotungamirira anogona kuita chishamiso chimwechete ichi.
Vanhu vanotungamirira vanokwanisa chete kushanda nekumanikidzika uye zviitiko zvenguva iyoyo. Nekuoma kwehupenyu hwemazuva ano, vanhu vanotungamirira havana ruzivo rwekuti chii chichaitika nguva inouya.
Hakuna akafanoona kuti masvingo eBerlin achadonha muna 1989 (izvi zvakaitika nekuda kwekuti paive pakanganisika). Hapana akafanoona 9/11 apo pakaparadzwa Twin Towers. Hapana akafanoona hondo mbiri dzeGalf kana kusimuka kusingatarisirwi kweISIS nehutsinye hwayo hwakakura kwazvo. Hakuna akafanoona hondo yemarudzi ekuSiria nekuwanda kwevapoteri vakatizira kuEurope.
Kunyangwe Brexit yakatisvikira takavarairwa apo England yakasarudza kubuda muEuropean Union. Hakuna akafanoona zviitiko zvegore rino risati raitika. Hatitogoni kufungidzira kukanganisika kwarinouya nako pamusoro pevanhu. Tinokwanisa chete kutarisira kuti nzira dzakanaka uye dzakasimba dekudzora kuipa dzichaita kuti pasave nekukangaisika kukuru.
Saka munyika ine shanduko dzakawandisa hatigoni kuvimba nemafungiro uye tariro dzevanhu vanotungamirira vanongofungidzira nekuti havagoni kuona nguva inouya zviri nani kukunda zvatinoitawo isu. Ndicho chikonzero nei vatungamiri “vakabuda muEurope” (Leave Europe) vakasarudza vasinawo chavanoziva sevamwe vanhu vose. Vakawanda vakasarudza “kubuda” vave kudemba, vachinyunyuta kuti hakuna akavaudzawo kuti mubairo wesarudzo dzavo waive wei. Nyika yakaoma kwazvo kuti ufungire kuti chiii chichaitika mangwana. Zvikuru sei vatungamiri “vakabuda” vaisaziva kuti chii chichaitika kana kuti idambudziko ripi ravaive vatangana naro.
MATEO 15:14 Varegei: mapofu anotungamirira mapofu. Zvino kana bofu richitungamirira bofu, achawira mugomba ose ari maviri.
Saka bvisai maziso enyu pahutungamiri hwevanhu, zvese mukereke kana munezvematongerwo enyika.
Vatungamiri vazhinji vane huwori vasina kufanira vari panyika nhasi uno uye vanoratidzira kwatiri, nenzira isina kuringana, kuti hutungamiri hwevanhu hahuvimbike zvachose. Saka tingavimbe nani?
Mutungamiri mumwechete chete, Jesu Kristu.
Rambai moyo yenyu kuna Jesu motenda nekutevera Bhaibheri rake. Ndiye mutungamiri mumwechete anoziva kuti chii chiri kuitika uye chichaitika mangwana.
Mutungamiri mumwechete chete ndiye asingatadzi, Jesu Kristu.
Isai meso enyu paari mumutevere kupfurikidza Shoko rake, Bhaibheri.